> Resource > iPad > Sida loo isticmaalo iPad sida An External Hard Drive
Marka la barbar dhigo iPad qalabka Android, waxaa laga yaabaa inaad shalaay iPad ma loo isticmaali karaa sida drive adag. Mar kasta oo aad wareejiyo xogta, sida music ama video, aad leedahay si aad u isticmaasho Lugood. Taa ka sii daran, kala iibsiga xogta Lugood waxaa wax looga qabtaa qaar ka mid ah qaabab xaddidan. Taas macnaheedu waxa weeye, haddii aad hesho qaar ka mid ah ama music videos la qaabab aan habboonayn, Lugood ma kaa caawin doona inaad ku wareejiso si aad iPad. Maxaa ka nixi waa.
Sidaa awgeed, waa u ahaan doontaa kaamil ah haddii aad u isticmaali kartaa sida iPad ah drive dibadda adag. Ma suurogalbaa? Dhididka No. Thanks to software xunna loogu talagalay - ka TunesGo Wondershare (Windows) ama TunesGo Wondershare (Mac) , hadda waxaad isticmaali kartaa iPad inay u dhoofiyaan, soo dejinta iyo tirtirto xogta on your iPad si xor ah sida aad u samayn la drive dibadda adag.
Download software iyo iskaan hanuunka fudud. Labada versions shaqeeyaan si la mid ah. Halkan, waxaan kaliya ku tusi doona sida loo isticmaalo iPad sida drive adag marka la isticmaalayo version Windows ah.
Fiiro gaar ah: The version Windows si wanaagsan buu falaa in maaraynta photos, music, video, xiriirada iyo SMS. Iyadoo version Mac ah, waxa aad maamuli kartaa music, videos iyo sawiro ku yaal.
Tallaabada 1. Orod software iyo xiriiriyaan iPad
Sida aad caadi ahaan u samayn, xiriiriyaan iPad in kombiyuutarka la cable USB ay. Orod software ah. Your iPad ugu dhakhsaha badan loo baadho doonaa, oo markaas muujiyaan ilaa uu furmo sida tan hoos ku.
Fiiro gaar ah: iPad mini, iPad 2, iPad Cusub, iPad iyo iPad la isha bandhigay socda macruufka 9, macruufka 8, macruufka 7, macruufka 5 & macruufka 6 ay si fiican u taageeray.
Tallaabada 2. Isticmaal iPad sida drive adag
Bedelka files ka iPad in computer / Lugood
On line hoose ee Window ah, guji Copy iDevice in Lugood > Start > nuqul Lugood . Markaas, aad si Lugood wareejin kartaa files warbaahinta doonayo. By gujinaya dhoofinta Music si gal , aad ogol yahay in ay gurmad music oo dhan si ay u gal kombiyuutarka.
Labada badhamada waa uu toobiye furayaasha si ay u gudbiyaan files ka iPad. Haddii aad rabto in gurmad files dheeraad ah, sida sawiro, waxaad u tagi kartaa si column bidix. Riix tab kasta inay soo qaadaan suuqa kala maamulka ay. Sax files doortay oo u dhoofin.
Files Nuqul ka computer si iPad
Sidoo kale, guji mid category, sida Media , on column bidix. In guddi saxda ah, guji Add ama Import / Dhoofinta in aad nuqulka music, video, sawiro iyo xiriirada ka computer, iyo soo dejinta Lugood playlist in aad iPad.
Delete file kasta oo ka iPad
Ka dib markii gujinaya category a on column ka tagay, waxa aad xulan kartaa faylasha Ma doonayo in aad mar dambe sii guddi saxda ah. Riix Delete inuu iyaga ka dhaqaajiyo ka iPad.
Ayaa waxyaabo badan oo aad samayn karto la software this
Bedelka files dhexeeya iPad, iPod iPhone iyo .
Samee playlists cusub oo albums on your iPad
Dhaqaaq sawiro ku giringiriya Camera in ay album ah
Ku dar xiriir cusub si iPad la teebabka iyo jiirka, iyo xiriirada ku milmaan nuqul
Beddelaan audio iyo video in iPad qaabab saaxiibtinimo .
Qodobbadani u fiican? Waa maxay sababta aan gashato iyo isku day la isticmaalayo iPad sida drive dibadda u adag?